फिटनेस - Samata Khabar
काठमाडौं : बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले पथ्थरीका कारण मिर्गौलामा समस्या देखिएको बताएका छन्। केही समय अगाडि आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उनले सो समस्या भएर ह्याम्स हस्पिटलमा उपचार भइरहेको बताएका हुन्। बुधबार बिहान २ बजेदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको र असह्य पीडा भएपछि अस्पताल भर्ना भएको उनले जनाएका छन्। मिर्गौलाको पथ्थरीका कारण पिसाब नै बन्द भएको […]
काठमाडौं । नेपाली सेनाको प्रतिविद्रोह तथा जंगल युद्धकला ९जंगल वारफेर० तालिम पहिलो पटक एक जना महिला सैनिक जवानले लिएकी छन् । १८ कात्तिकदेखि ६ माघसम्म भएको तालिममा प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेर शिक्षालयकी सैनिक जवान राधिका थापाले महिलातर्फ पहिलो पटक तालिम लिएकी हुन् । सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार उनी १५ असार २०६९ सालमा सैन्य […]
१. “ग्यास्ट्रिक” भनेको के हो ? -ग्यास्ट्रिकको शाब्दिक अर्थ हो “पेट सम्बन्धि” l ग्यास्ट्रिक रोगको नाम होइन l खै कसले यसलाई रोगको नाम भनेर शुरु गर्यो म अचम्मित छु l नेपाली जनमानसमा फरक फरक व्यक्तिले ग्यास्ट्रिकको फरक फरक अर्थ लगाउने गरेको पाएँ l धेरैको बुझाइमा ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको अम्लिए पदार्थ फर्किएर माथि आएको (acid reflux) भन्ने पाएँ l […]